भारतका विश्वास पात्र डा.युवराज खतिवडा गभर्नर र अर्थमन्त्रीपछि अब के ? – Medianp
भारतका विश्वास पात्र डा.युवराज खतिवडा गभर्नर र अर्थमन्त्रीपछि अब के ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन ३०, २०७४१३:२०0
काठमाडौं, ३० फागुन । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक महिनाभित्रै उनी निकट अर्थमन्त्री खतिवडा भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन् । उनी आजै दिउँसो भारतको हरियाणामा आयोजना हुने ‘प्रतिआतंकवाद सम्मेलन’ मा भाग लिन नयाँ दिल्ली जाँदैछन् ।
गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भए पनि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रीलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा बादल छन् । उनले मुख्य वक्ताका रूपमा बिहीबार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् । खतिवडा बिहीबारै आउने बताइएको छ ।
खतिवडाले कूटनीतिक भेटवार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुनै टुंगो लागिसकेको छैन । भारतमा फ्रान्सका राष्ट्रपति र भुटानका प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रहेकाले खतिवडाको राजनीतिक भेटघाट निश्चित भइनसकेको बुझिएको छ ।
ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनको मन्त्रिपरिषद्का पहिलो सदस्यका रूपमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेश भ्रमण गर्न लागेका हुन् । खतिवडा भारतका विश्वास पात्र मन्त्री मानिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री नबनाउँदै भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले खतिवडालाई राम्रो मन्त्रालय लिन लागेकोमा बधाई दिएका थिए ।
भारतमा मनमोहन सिंह केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले १० वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा भारतलाई निकै समृद्ध बनाएका थिए । संयोगले खतिवडा पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री भइसकेका छन् । उनले अब आफू प्रधानमन्त्री बन्ने लाइनमा रहेको आफू निकट नेताहरूलाई बताउँदै हिँडेको स्रोतले बतायो ।
हलिउड गायक जेन मालिकको ब्रेक अप
प्रिया प्रकाशलाई मोबाइल बोक्न प्रतिबन्ध